CloudMagic inogadziridzwa ichiita kuti ienderane neIOS 10 | IPhone nhau
CloudMagic inogadziridzwa ichiita kuti ienderane neIOS 10
Pane nguva shoma dzatataura pano nezve CloudMagic, ino inonakidza email mutengi iyo yakabira yedu yese moyo. Uye chaizvo, semushandisi wenguva dzose, ini handizozvicheka ndichirumbidza mashandiro ayo, asi kana mukusimbisa zvikanganiso zvayo. Asi kana paine chimwe chinhu chakagara chakaratidza CloudMagic, ndiko kufarira kwaro mukusimudzira, chimwe chinhu icho zvimwe zvinoshandiswa seTeregiramu zvakare zvinotora kune iyo tsamba, uye izvo zvinoita kuti zvinyanye kunakidza. CloudMagic inogadziridzwa ichiita kuti iwirirane neIOS 10, chimwe chinhu chiri chidimbu chekufunga nezvevashandisi vakaita seni, isu tinoda kuyedza ese maApp betas, nguva dzose nechinangwa chekukuudza zvachose zvese zvichave zviripo mushanduro nyowani dzeIOS.
Kuti, Yakanga iri nhasi pakavandudzwa 7.12.61, maawa mashoma nguva dza19: 00 dzisati dzaitika kuSpainChaizvoizvo patinotarisira yekutanga iOS 10 yeruzhinji beta uye yechipiri yekuvandudza beta kusvika, iyo yandiri kutarisira kuisa. Chinhu chakanyanya kukosha pamusoro pebeta idzi ndechekuti zvigadzirwa zvekugadzira kana izvo zvatinonyatsoshandisa zuva rega rega zvinoshanda, uye izvo zvatoitwa neCloudMagic neichi chitsva chiitiko.
Chii Chitsva muVhezheni 7.12.61
● Yako CloudMagic ikozvino inoshanda pane yazvino iOS Beta.
● Kugadziriswa kwezvipuka uye kugadzirisa mashandiro.
CloudMagic inokodzera rukudzo rwayo rwese, nekuda kweayo gore tsamba tsamba yashandura nzira yekuyambuka-chikuva tsamba inoshanda. Inotora 51 MB chete yeIOS uye inowanikwa pane chero chishandiso cheIOS inomhanya vhezheni 8.0 kana yepamusoro. Inoenderana nemitauro isingaverengeke, uyezve, zvachose. Iyo zvakare ine kunyorera macOS, kunyange izvi zvisiri zvemahara. Yakaunganidza 4,5 / 5 nyeredzi muApp Store, iyo inokodzera, saka kana usati waedza email mukati megore, ino ndiyo nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » CloudMagic inogadziridzwa ichiita kuti ienderane neIOS 10
YouTube inoda kukwikwidza yakanangana neNetflix